Muxaadaradii Soomaalida Alle-diidka”Atheist”  | Doodwadaag waa Danwadaag.
Muxaadaradii Soomaalida Alle-diidka”Atheist” 
Waa madal dad badan oo rag iyo dumarba isugu jira ay soo cammireen. Waxaa shirguddoonka fadhiya koox Alle-diid ah oo isugu jira rag iyo dumar. Waa kala da’. Ragga qaar baa madaxu caddaaday, inta kalana waa gadh madoobe iyo dhallinyaro. Waxaa weheliya laba dumar ah oo aad u firfircoon. Waxaaba la leeyahay iyaga ayaa kulankan taariikhiga ah soo qaban qaabiyey. Goobta waxaa lagu xardhay hal ku dhig ah ” Aynu ka Xorowno Diinta Carabta”.
Wax yar ka dib xiriiriyihii barnaamijka ayaa cod baahiyihii qabsaday. Waa labadii dumarka ahaa midood. “Habeen wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin, ku soo dhawaada kulankan aad muddo dheer sugayseen” ayay tiri iyada oo hadalka sii wadata. Waxay si kooban u sharaxday sida ay barnaamijka u daadihin doonto. ” Barnaamijkeenna caawa sidan ayuu u soconayaa. Isbarasho kooban ayaa ugu horraysa. Aan iskiin baro martida caawa idiin soo bandhigi doonta.
Magacyadooda waxaa la dhahaa. 1- Darbi-jabiye, waa ninkan i soo xiga ee koofiyadda buluugga xidhan. 2- Damiir-dile, waa ninka ku xiga ee shaadhka midabada isku dhafan xidhan. 4- Dooda, waa inanta dhexe. 5- Dulleeye waa ninkaa muraayadaha ku xarragoonaya. 6- Diide, waa odaygaa gadhka iyo madaxu caddaaday. 7- Nabe, waa ninkaa make-up ku u marsan yahay, dhegadhegahana xiran. 8- iyo aniga oo Duryama ah.
Intaa ka dib, martida ayaa mid kastaaba inoogu sharraxayaa shan daqiiqo sababta aynu diinta carabta uga xoroobayno iyo marka aynu ka xorowno barwaaqada ay innaga hor taagnayd ee aynu heli doono.
Waxaa inoo xigi doona su’aalaha oo qof waliba halka uu joogo loogu gayn doono cod baahiyaha. Waxaan rajaynayaa in aynu ilaalino nidaamka. Qofkii caytama, qayliya ama gacan soo taaga waxaa loogu yeerayaa kooxda amniga, dibadda ayaana loo saarayaa.
Dhinacaa midig waxaa ka muuqda buugaag iyo dhambaal sidayaal yar yar af soomaali lagu qoray oo si fiican idiin fahan siin doona nolosha iyo farxadda ay heleen dadkii ka xoroobay diimaha. Nasiib wanaag qaar ka mid ah qorayaashii soo tarjumay qoraaladaa dhaxal galka ah ayaa inala jooga caawa. Waa qorayaal inala jecel nuurka nolosha. Dib u dhaca iyo foolxumada ina haysata ka gilgishay. Ajar doon ma ahan waayo way ka xoroobeen khuraafaadka ajarka iyo cidda abaalgudkaa bixisa. Waxay doonayaan inaad farxad ku noolaataan.
Soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada.
Haddana waxaan u yeerayaa martisharafkeenna ugu horreeya waa Nabe.
Sida aad arki kartaan Nabe maanta waxa uu xidhan yahay dharka dumarka. Waxa uu isu qurxiyey sida dumarka. Halgan dheer ayuu u soo galay inuu helo xorriyad uu sida uu doono u labbisto, dadkana la wadaago dareenkiisa. Maanta farxad ayuu ku noolyahay. Wuxuu u ololeeyaa in aan loo kala calaamadin labbiska iyo isqurxinta ragga iyo dumarka. Waa xubin firfircoon.
Isaga ayaa afkiisa inoogu sheegi doona. Soo dhawoow Nabe.”
La soco qaybta labaad……..